Spider-Man: အိမ်မှမော်ကွန်းတိုက်မှဝေးကွာ Brick Fanatics
Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ.
နယူး Spider-Man: No Way Home နမူနာသည် LEGO အတွဲများကို ပို၍ပင် ရှုပ်ထွေးစေသည်။
17 / 11 / 2021 17 / 11 / 2021 ခရစ် Wharfe 123 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, Lego, Lego Marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, နက်နဲသောအရာ, နစ်ခ် Fury, ဆိုးညစ်ခြောက်, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group, လင်းတ
အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ် Spider-Man: No Way Home သည် ဤနေရာတွင်ရှိပြီး ၎င်းကို LEGO အစုံသုံးမျိုးထဲမှ တစ်ခုကို ဖန်တီးထားသည်။
23 / 10 / 2021 23 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 218 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, နေ့စဉ်အမှား, ဆရာဝန် Octopus, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Electro, အင်ပါယာ, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego Marvel, မဂ္ဂဇင်း, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, နက်နဲသောအရာ, Sandman, Spider-Man, Spider-man Homecoming, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 385 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, အဲဖရက် Molina, Doc Ock ပါ, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Marvel, ကောလာဟလာ, ဆမ် Raimi, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group, တွမ်ဟော်လန်, Willem Dafoe
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 286 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, အဲဖရက် Molina, Doc Ock ပါ, အစိမ်းရောင် Goblin, Jake Gyllenhaal, Lego, Lego Marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Michael keaton, နက်နဲသောအရာ, ဆမ် Raimi, Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, လင်းတ, Willem Dafoe, YouTube ကို
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 396 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Marvel, Lego Spider-Man, LEGO.com, Marvel, MJ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group, Wong က
LEGO ကမည်သို့ရှင်းပြသည် Marvel နှင့် DC ရုပ်ရှင်နှောင့်နှေးမှုသည် ၂၀၂၁ အစုံကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်
17 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 419 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, Black ကမုဆိုးမ, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, နိစ္စထာဝရ, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Infinity Saga, Jesper Nielsen, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego Marvel, Lego Spider-Man, Mark Stafford, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ LEGO Group, Warner Bros.
အဆိုပါ LEGO Group နှောင့်နှေးပုံကိုရှင်းပြသည် Marvel နှင့် DC ရုပ်ရှင်များသည်ယခုနှစ်စူပါဟီးရိုးအတွဲများစာရင်းတွင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
03 / 07 / 2021 03 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 377 Views စာ0မှတ်ချက် 10214 မျှော်စင်တံတား, ရွံရှာဖွယ်, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, ဒေါက်တာထူးဆန်းတယ်, ဒေါက်တာ ထူးဆန်း, ဝေးနေအိမ်, ဟောင်ကောင်, hulk, သံမဏိလူသား, Iron Man 3, Lego, Lego သံက Man, Lego Marvel, Lego Spider-Man, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., အဆိုပါ Incredible Hulk, Thor, မျှော်စင်တံတား
02 / 07 / 2021 02 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 648 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Funko, Lego, Lego Marvel, Lego Spider-Man, Marvel, marvel ဒဏ္ဍာရီ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group
02 / 07 / 2021 19 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 713 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, နစ်ခ် Fury, Samuel L. Jackson လည်း, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group